Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Ayoze Perez Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
Emelitere ikpeazụ June 29, 2020
LB na-egosi Full Story of a Football Genius known with the name; "Ayo". Ụmụaka anyị na-atụ egwu akụkọ Akụkọ na akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma Akụkọ gbasara akụkọ ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Ayoze Perez Child Story- The Analysis to Date. Ebe E Si Nweta Eche na Mgbaru Ọsọ
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọdịdị ya n'ịgbanwe maka ọnọdụ ọ bụla na-awakpo nke na - eme ka ọ "Mr Reliable". Otú ọ dị, ọ bụ nanị aka ole na ole nke ndị football football na-atụle Ayoze Perez Biography nke bụ ihe na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Ayoze Perez Ụmụaka Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu Eziokwu- Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Malite, aha ya nile bụ Ayoze Pérez Gutiérrez. Ayoze Perez dị ka a na-akpọkarị ya na 23 July 1993 na Santa Cruz de Tenerife, Spain. N'okpuru ebe a bụ foto mara mma nke ndị nne na nna Ayoze Perez bụ ụmụ amaala nke Canary Islands dị n'ụsọ oké osimiri nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ Africa.
Ndị nne na nna Ayoze Perez. Ebe E Si Nweta Instagram
N'adịghị ka ihe ọtụtụ ndị nkiri kwenyere, ezinụlọ Ayoze Perez sitere na ya site na agwaetiti West Africa dị anya na Spain. Agwaetiti ya bụ nke ndị Spain chịchara ma bụrụ nke dị n'oké Osimiri Atlantic, 100 kilomita n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Morocco bụ ya bụ ebe kachasị nso.
Ayoze Perez Family Ezigbo na mmalite. Ebe E Si Nweta MJ, Premier League na Wikipedia.
N'ịbụ onye na-eto eto site n'ezinụlọ ndị dị n'etiti, Ayoze ji oge dị ukwuu soro nwanne ya nwoke aha ya bụ Samuel ma ọ bụ Sammy nọchie anya ya na nwanne ya nwoke na ndị nne na nna ya.
Ayoze Perez Family. Ebe E Si Nweta Instagram
Ayoze Perez zụlitere n'otu ụlọ okpukpe, site na alaka ụlọ ụka Roman Katọlik, nke bụ isi okpukpe nke na-eme 84.9% nke ndị bi na Tenerife.
Ayoze Perez Ụmụaka Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu Eziokwu- Nkụzi na ịrụ ọrụ
Ayoze Perez sere onyinyo aka ekpe, nwanne ya nwoke Samuel sere onyinyo. Ebe E Si Nweta Instagram
N'oge njedebe nke 1990s, ụda egwuregwu nke Ayoze na nnukwu nwanne ya bụ Sammy ga-enwe nsogbu site na mkpọtụ nke football nke Tenerife. Ka ha na etolite, ha abụọ na-agbakọ bọlbụ kwa ụbọchị ma n'èzí ma n'ime ụlọ obibi ha.
Ndị maara ha n'oge ahụ ga-akọwa ma ụmụ nwoke dị ka ndị na-eme n'ọdịnihu ndị nwere njikọ pụrụ iche na nghọta telepathic na egwuregwu ha. Ná mmalite, ụmụ nwoke abụọ nọrịrị nrọ nke ịnweta agụmakwụkwọ bọlbụ site na agụmakwụkwọ. Dị ka ihe ọzọ na-eme n'ịgba agbapụta ime ụlọ, ndị nne na nna Ayoze Perez kpebiri ịkụ ụmụ ha na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ a maara nke ọma na Tenerife, CD San ​​Andrés.
Ayoze Perez Ụmụaka Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu Eziokwu- Ndụ Ndụ Mmalite
Mmasị maka bọl na mkpa iji gosipụta talent ha hụrụ ma Ayoze na Sammy na-edebanye aha na mpaghara aha ha, CD San ​​Andrés.
Mgbe Ayoze na-egwuri egwu dị ka onye na-alụ ọgụ n'etiti obodo, nwanne ya nwoke tọrọ ya bụ Samuel na-egwuri egwu. Nne na nna ha kwetara na ụmụ abụọ ahụ ga-egwu n'otu otu ahụ ka ha nọrọ ọnụ. Ịmepụta otu n'ime otu egwuregwu ahụ na-egwu egwu ka Ayoze na-egwu egwu megide egwuregwu ka ukwuu.
Mgbe o mechara 4 afọ na CD San ​​Andrés, nwa okorobịa Ayoze gara UD Santa Cruz, bụ onye a ma ama maka agụmakwụkwọ nke ndị na-eto eto n'ime ụlọ akwụkwọ mahadum nke Tenerife nke mere na ọ bụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ kacha elu na Island.
Ayoze Perez Ụmụaka Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu Eziokwu- Akpanwu akwukwo akuko
Mgbaghara nke ekpere na ekpere iji ghọọ Tenerife na-eme egwuregwu soccer na-agaghị agafe.
Ụzọ Ayoze Perez. Ebe E Si Nweta Ogbaala Ụwa
Afọ 2011 na 2012 na-egosi mgbanwe na ọrụ nwa ya. Ọ bụ n'afọ ọ kwalitere Tenerife B na A.
Ịjụ Real Madrid na FC Barcelona:
Ọ dịghị anya maka Ayoze ka ọ malite inwe mmetụta na Tenerife. Na October 2014, Ayoze meriri Breakthrough Player na 2013-14 Segunda División. O merikwara Midfielder kachasị mma na 2013-14 Segunda División Awards.
Mmiri ahụ kpaliri agadi ahụ dị nnọọ ngwa n'ihi ekele ya dị ukwuu na Segunda Division. Nke a hụrụ Real Madrid na Barcelona na-amagharị ya gburugburu n'oge okpomọkụ nke 2014. N'etiti nnukwu klọb na-agụ, ọ bụ Newcastle gosiri n'ezie ọchịchọ ịbanye Ayoze.
Ị maara?… Ayoze Perez nwanna nwoke na-agbakwa ụkwụ kpebiri hapụ ụlọ ọrụ ya iji soro nwanne ya nwoke na England na-atụ anya na ọ ga-edozi onwe ya na ụlọ ịgba egwu n'ebe ahụ. Ụmụnna abụọ ahụ hapụrụ Santa Cruz na-acha anwụ anwụ na ugwu Tenerife iji ghọta nrọ ha na Newcastle.
Ayoze na Sammy na-ebikọ ọnụ ha. Ebe E Si Nweta Oge Ndụ
Ayoze Perez Ụmụaka Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu Eziokwu- Na-ewu ewu Akụkọ
Newcastle akwụ ụgwọ nanị £ 2 maka Ayoze nke bụ ego egoekere na egwuregwu nke oge a. Mgbe ọ bịarutere Newcastle, Ayoze na nwanne ya nwoke, bụ Samuel, kwagara n'otu ụlọ.
Ụmụnna ahụ aghaghị ịmalite ime mgbanwe maka obodo, asụsụ, ndị mmadụ, ọdịbendị.
Perez kwuru otu oge. "Enweghị m ihe ọ bụla banyere ebe ahụ, ebe ọ nọ na England, ihe ọ bụla. Ọ bụ ihe ijuanya ịhụ, dị ka ọ dị mma Newcastle. Ee, mụ na nwanne m kwagara ebe mbụ m bịara ebe a. Ozugbo m bịanyere aka na ya kpebiri ka mụ na ya gafee, ee, ọ dịghị mgbe m jụrụ ya, ọ bịara! Anyị anọkọla ọnụ. "
Ọ bụ afọ dị ukwuu maka ụmụnna nọ na Tyneside nke ha kpọrọ n'ụlọ. E nweela oge, oge na-adịghị mma nke football. Dị ka ọ dị n'oge ederede, onye na-eme egwuregwu na-eti mkpu nwere ghọọ elu na ike na ya na mmekọrịta dị egwu na Salomón Rondón.
Ayoze Perez na-eme ka a mara aha akụkọ. Ebe E Si Nweta Oge Ndụ
Dị ka Alan Shearer, a ga-echeta Ayoze dị ka akụkọ Newcastle. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ayoze Perez Ụmụaka Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu Eziokwu- Ndụ mmekọrịta
Site na ịrị elu Ayoze Perez ka a ma ama, ajụjụ a na-agwa onye ọ bụla bụ ...Onye bụ enyi nwanyị Ayoze Perez, nwunye ma ọ bụ WAG?.
Enyi Ayoze Perez. Ebe E Si Nweta Instagram
Ihe omuma nke a na-ezo ezo nke Ayoze Perez bụ nke ga-apụnahụ nyocha anya ọha na eze nanị n'ihi na ndụ ịhụnanya ya dị nnọọ iche. Kemgbe ọtụtụ afọ, Ayoze Perez ahọrọwo ilekwasị anya na ọrụ ya ma chọpụta izere ọhụụ ọ bụla na ndụ ya. Eziokwu a na-eme ka o siere anyị ike inwe ihe ọmụma ọ bụla banyere ndụ ịhụnanya ya.
Otú ọ dị, dị ka akụkọ na-ekwenye ekwenye, Ayoze Perez anọwo na enyi nwanyị a na-amaghị na ọ bụ karịa 3 afọ tupu ya emee atụmatụ. Dị ka FootallImagines;
"Ayoze Perez na-amalite ịnọ n'ebe dị anya ma chee na ya na ya ga-agbaji, mana ọ na-achọpụta na ọ na-eme atụmatụ ịtinye (na pitch mgbe egwuregwu)." A na-eche na ha kwesịrị ịlụ di na nwunye ugbu a.
Ayoze Perez Ụmụaka Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu Eziokwu- Ndụ nke Onye
Ịmata Ayoze Perez ndụ onwe gị pụọ na bọlbụ ga-eme ka ị nweta nkọwa zuru ezu banyere ya. Malite, Perez bụ onye nwere obi ụtọ, mmesapụ aka, obi ọkụ, obi ụtọ. Nke a mere ka ọ bụrụ otu osisi vaịn na-ama n'anya.
Malite na, ọ bụ onye natara ọtụtụ nzaghachi mgbe ọ na-abịa ọrụ ndị ọrụ na ụmụaka.
Ị maara?… Perez bụ onye nnọchiteanya ntọala Newcastle. Ọtụtụ mgbe, ọ na-aga n'ụlọ akwụkwọ iji soro ụmụaka na-emekọrịta ihe site na ịgba chaa chaa.
Ayoze Perez Personal Life Facts- Ebe E Si Nweta Instagram
Ayoze Perez Ụmụaka Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu Eziokwu- Ndụ Ezinụlọ
Site na Tenerife ruo Tyneside, ezinụlọ Ayoze Perez chọtara ụlọ dị na Newcastle n'ihi ọganihu nwa ha nke ọdụdụ. N'okpuru ebe a bụ vidiyo nke gosipụtara oge obi ụtọ site n'aka ndị Perez ka ha na-eme ememme ụbọchị ọmụmụ nke onye òtù ezinụlọ ha kacha nwee ọganihu.
Ikpe ikpe site na Ayoze na mgbasa akụkọ mgbasa ozi na vidiyo ezinụlọ n'elu, ị ga-achọpụta na ọ dị nso karịa nne ya karịa nna. Otú ọ dị, Ayozeeme ka obi sie nne na nna ya ike ma nwee obi uto di ka ntinye aka ya n'egwuregwu.
Nne Ayoze Perez. Ebe E Si Nweta Instagram
More banyere nwanne ya: Samuel Pérez Gutiérrez mụrụ na Mar 23, 1990 nke pụtara na ọ dị afọ atọ karịa nwanne ya nwoke bụ Ayoze.
Nwanna-Samuel nke Ayoze Perez. Ebe E Si Nweta Instagram
Big Sammy ga-echeta ebighi ebi dị ka otu n'ime ụmụnna na-ahụ n'anya na football. Dị ka e kwuru na mbụ, o mere onyinye kachasị mma nke inyere nwanne ya nwoke aka ịbanye ma soro ya na-arụkọ ọrụ ọbụna ka ọ tụkwasịrị ọrụ ya iji kwado nwanne ya nwoke.
Ị maara?… Sammy ghọrọ onye na-abụghị onye egwuregwu mgbe ya na nwanne ya nwoke nọ na Newcastle. Ọ bụ ezie na Ayoze na-arịwanye elu ngwa ngwa kemgbe ọ bịarutere na Tyneside na June 2014 maara nke ọma, njem nwanne ya nwoke nke okenye mere ka ọ ghara ịdị mma na nke ọma.
Banyere Ayoze Perez Ezigbo: Ọ bụghị ụmụ nwoke nwoke niile nọ na Perez na-azụ ahịa. Ọbụna ezinyere ezinụlọ. Ị maara?… Nwanne nwanne Ayoze María José Pérez dịka oge edere bụ ihe na-aga n'ihu maka Levante UD Femenino nakwa otu onye otu mba ndị inyom Spanish.
Ayoze Perez's Cousin- María José Pérez. Ebe E Si Nweta YouTube
Na-ekpe ikpe site n'aka ya, ị ga-achọpụta na ị na-ele ndị Perezs anya.
Ayoze Perez Ụmụaka Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu Eziokwu- LifeStyle
Dị ka TransferMarker, Ayoze Perez nwere uru ahịa taa na 10,00 Mill €. Ụgwọ ụgwọ ọ na-akwụ kwa izu nke £ 45,000 ga-eme ka ọ bụrụ nde ndị nde mmadụ. Otú ọ dị, nke a adịghị agafe na ndụ dị mma.
Igodo nke nkwalite mmụta ọsọ ọsọ Nna-ukwu kacha elu Ching Hai Nke a pụtara na ị gaghị etinye aka dị ka onye nzuzu, ma ọ bụ na-agbanwe ndụ ya.
Ayoze Perez's LifeStyle Eziokwu. Ebe E Si Nweta Instagram
Ayoze Perez Ụmụaka Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu Eziokwu- Eziokwu efu
Aha "Ikwuputa"Bụ ụfọdụ ndị na-agba bọl na-aghọtakarị na ha sitere na Nigeria. Aha a di ka ndi Igbo na-ekwu okwu nke mba West African. Ọzọkwa, aha aha Ayoze Perez bụ "Ayo". Aha a na - ede aha a bu ndi Yoruba na - ekwu okwu nke Naijiria
Ayoze Perez nwere nyocha, ikpe nke ndị Fans na ndị na-ede blọgụ na-ezighị ezi na iche echiche nke foto Santiago Munez bụ nke Ayoze n'oge ọ bụ nwata.
Ayoze Perez Eziokwu na-adịghị mma- Banyere anya ya. Ebe E Si Nweta Twitter
Ayoze Perez mụrụ na 1990 nke a na-echeta mgbe niile dị ka afọ iri nke ọganihu n'ụwa. N'ikpeazụ, ndị 1990 ahụ hụrụ Soviet Union dara na ìgwè ụmụaka (Boyz II Ụmụ nwoke, Backstreet Boys na Westlife) chịrị egwu egwu.
N'afọ iri a, ọhụụ nke Internet (Web Wide Web) na-arị elu. Ọzọkwa na 1990, ezitere ozi ederede SMS mbụ, e mepụtara DVD, Sony PlayStation tọhapụrụ ma Google tọrọ ntọala. N'ikwu okwu banyere PlayStation, Ayoze bụ onye na-aṅụ ọgwụ FIFA.
Ayoze Perez Eziokwu na-adịghị mma - A hụrụ n'anya FIFA. Ebe E Si Nweta Twitter
Ugbu a dị ka n'oge ederede, Ayoze na-ahọrọ 13 na ndị Newcastle na-eche ihe mgbaru ọsọ. Michael Owen nke na-esonụ.
Ayoze Perez nke Newcastle Goal Rank Rank. Ebe E Si Nweta Twitter
Ayoze Perez Ụmụaka Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu Eziokwu- Video Nchịkọta
Nyochaa: Daalụ maka ị gụ akwụkwọ anyị Ayoze Perez Akụkọ nke gbasara eziokwu efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
gbalịsie ike July 1, 2019 Na 6: 16 pm
ana m achọ izute ayoze
ya nnukwu onye fan si Zimbabwe.
Bọchị gbanwee: Mee 24, 2020